Vabereki Vakawanda Vochemachema Zvichitevera Kukwidzwa kweMari yeBvunzo
Kukadzi 07, 2020
Varairidzi nevabereki vanoti vakatyamadzwa nehurumende iyo yakwidza mari yebvunzo dzeOrdinary Level ne Advanced Level zvakanyanya izvo vanoti zvichatadzisa vana vakawanda kunyora bvunzo idzi.
Bandiko rehurumende rinoona nezvebvunzo reZimbabwe School Examinations Council, kana kuti Zimsec, ranyorera zvikoro zvese munyika richizivisa nezvekukwira kwemari yebvunzo dze O ne A Level kutanga muna Chikumi.
Chiziviso ichi chaonekwa neStudio 7, chanyorwa nemutevedzeri anoona nezvemari muZimsec, Amai Z. Muzenda,chinoti chidzidzo chimwe che O Level chave kuita zana nemakumi mapfumbamwe emadhora, kubva pamadhora gumi; kozoti chidzidzo chimwe cheA Level chakwira kubva pamadhora gumi nemashanu kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu nerimwe emadhora.
Zimsec inoti vanoda kunyora bvunzo muna Chikumi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi nemusi wa 28 Kukadzi, kozoti vanoda kunyora bvunzo muna Mbudzi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi nemusi wa 27 Kurume usati wasvika.
Vanonoka kubhara mari idzi vanozobhadhara mazana maviri nemakumi vaviri nemadhora masere pachidzo chimwe pa O Level; kozoti madhora mazana mana mekumi matatu nemaviri pa A Level.
Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende iri kuramba ichiomesera vabereki avo vakatoomerwa nechekare.
Mumwe mubereki wemuHarare, VaStan Nyatsanza, vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa neZimsec sezvo zvichipokana nezvekataurwa nebazi rezvedzidzo yepasi iro rakati mari yedzidzo haifaniri kukwidzwa zvakanyaya kuitira kuti vana vese vawane dzidzo.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union, VaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende kurambidza vana vevarombo kudzidza munyika.
Bandiko revarairidzi vechidiki murimwe remasangano anomirira varairidzi, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rashorawo zvaitwa neZimsec richiti vabereki vakawanda havakwanisi kuwana mari iyi.
Kunyange hazvo mutauriri weZimsec, Nicky Dhlamini, abvuma kuti ndizvo zvaitwa neZimsec, aramba kutaura zvakawanda achiti nzvimbo dzese hadzisati dzawona chiziviso.
Gurukota rezvedzidzo, VaCain Mathema, varamba kutaura neStudio7 vachiti havataure nenhepfenyuro ino.